Ihe ohuru GoPro Hero 6 ga - enyere anyị aka ịdekọ vidiyo na 4k na 60 fps | Akụkọ akụrụngwa
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite ya, GoPro abụrụla ihe ngosi maka ụwa nke egwuregwu ma ọ bụ n'okpuru mmiri, n'elu ugwu ma ọ bụ n'ọnọdụ ọ bụla ọzọ. Ma ntakịrị ntakịrị ọnụ ọgụgụ ndị China na-abịarute n'ahịa ahụ, nke mere ka ụlọ ọrụ ahụ nwaa imeghari na ahia site launching dị ọnụ ala ụdịDị nke o mechara hapụ ahịa ebe ọ bụ na, n'agbanyeghị nke ahụ, ha karịrị ngwaahịa Asia na ọnụahịa, yana mma. N'ụzọ nke a, GoPro kpebiri ilekwasị anya na igwe foto ya dị elu. Modeldị ọzọ ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịmalite ga-abụ GoHero 6, ihe atụ ga-enyere anyị aka ịdekọ vidiyo na 4k quality na 6p fps.
Ọ bụ ezie na ịdị adị nke telivishọn na mkpebi 4k adịghị oke obosara, ọtụtụ bụ ndị nrụpụta na-anwa na-atụ anya ọdịmma onye ọrụ n'ọdịnihu na ọtụtụ bụ ngwaọrụ ndị na-enye anyị ohere ịdekọ vidiyo na mkpebi a, mana ole na ole na-ekwe ka ọ mee ya na 60 fps. Ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ndị na-enye anyị ohere ịdekọ ọdịnaya na 4k mma na-eme ya na 30 fps, ọnụego etiti nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ndekọ na oke mma.
Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkwalite ogo na mmiri nke ihe onyonyo a, anyị ga-abawanye ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa abụọ. Nke a bụ ebe GoPro Hero 6 ọhụrụ agaghị enwe asọmpi mgbe ọ na-akụ ahịa ahụ n'oge na-adịghị anya, ebe ọ na-agbasawanye ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa nke abụọ ruo 60, dị ka iPhone 8 ọhụrụ, 8 Plus na iPhone X. ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ emebeghị ka ọ pụta ìhè. ihe omuma ohuru a, onye nkesa agbasawo foto nke nkwakọ ngwaahịa, ebe ị nwere ike ịhụ ogo vidiyo ọhụụ nke anyị ga-enwe ike ikwu maka vidiyo anyị kacha amasị anyị mgbe anyị na-eme egwuregwu, mmiri mmiri, ịrị ugwu ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ihe ohuru GoPro Hero 6 ga - enyere anyị aka ịdekọ vidiyo na 4k na 60 fps
Google Maps na-agbasawanye usoro ihe omume Nduzi Obodo site na nyocha vidiyo